Mayelana nathi - Ama-Bucks wamahhala
Uyemukelwa kwisiza se-inthanethi esihle kakhulu se khulula V Bucks. Njengoba isungulwe ngabafo abasaqala ukusebenza kwezobuchwepheshe, leli sayithi likhombisa ukuthi liyisitolo esisodwa samahhala iV Bucks. Ngokushesha iba yindawo yokuqala ngohlobo lwayo. Noma singenawo umlando omude wokuba khona ku-inthanethi, ukusebenza kwethu kanzima nentshisekelo yethu kusibeke ebalazweni.
Izinsizakalo zethu ziya ngokuya zithandwa ngababukeli bethu. Siyaziqhenya ngokunakwa ngokungaguquki amasayithi akhuluma ngamakhodi wokukhohlisa kwezemidlalo. Siyaqhubeka nokuthola izibuyekezo ezinhle nezikhuthazayo ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke, kufakazela impela ukuthi kufanele isikhathi sethu nemizamo yethu.
Uma ngikhuluma iqiniso, asinalo iqembu elikhulu. Kepha, iqembu lethu elincane likwazi ngokwanele ukugcina Cheats yethu yomdlalo isebenza ngaso sonke isikhathi ngaphandle kwama-hiccups. Futhi, sinabafana ababili be-admin abanakekela i-server, emuva emuva, nakho konke okunye okuye kulungiswa kwewebhusayithi.
Kuze kube manje, sikwazile ukusiza amashumi nezinkulungwane zabadlali laphaya. Futhi, inhloso yethu iyaqhubeka nokuhlala ifana. Sifuna ukusiza abadlali abaningi beDurban ngangokunokwenzeka ukubavumela bawujabulele umdlalo ngokugcwele ngaphandle kokuchitha isikhathi esikhwameni sabo. Uma nje udlala i-Fort Night, ungathembela kithi ukukusiza ukuphuma.
Siyaqiniseka ukuthi iqembu lethu elisondelene nalo lizoqhubeka nokukunikeza isipiliyoni esihle kakhulu somsebenzisi. Njengoba isiza siqhubeka sikhula, sibeka unyawo lwethu phambili ukuze sihlale sithembekile ezimpandeni zethu. Sisebenza kanzima ukugcina izingxoxo zethu zomdlalo zivuselelwa zikhathi zonke ukuze ungangeni ezindabeni ezithile. Idrayivu yethu izohlala, futhi silindele ukuhlangana nazo zonke izidingo zakho.